GEENYADII GALBATEY IYO HALAQII LABA AFLAHA
Saado allaha ha naxariistee, ruux walboo diley, una diidey nolosha ay aduunka ku laheyd, waxaa jira mid ayan u diidi Karin, dhaxalna ay u laheyd ayadu, waa magaca iyo murtidii ay soomaali uga tegtay ayada oo xaqa u hiilineysa. Si walba oo loogu fakarey in la aamusiyay Saado Cali, waxaa adag in la aamusiyo ama la aaso dhaxalkii ay ka tagtey.
Ma ayan aheyn fanaanad kaliya, ee waxa ay dheereyd hablaha kale ee faniinta ahaa ayaa waxa uu ahaa in ay dareemeysay in masuuliyad ka saran tahay dadkeeda Soomaaliyeed, tanoo ku qasbeysay in ayan afka ka ceshan siyaasadihii iyo dabinadii lagu kala dilayay bulshada Soomaaliyeed.
Saado waxa u dheereyd taas waxa ay aheyd in qabyaalada dadkii u istaagey ka hortageeda ay ugu horeysay, waxa ay qayb ka aheyd kacdoonadii kacaanka iinihiisa loogu tilmaamayay.
Waxa ay aheyd gabadha kaliya ee Silsiladii Deelley qaybta ku leheyd.
Waxa ay hormood ka ahyed Ruwaayadii Alleylehe Shil Baa dhacay ee Abwaan Abdi Muxumed Amiin. Ayadoo aheyd gabadhii kaliya ee si toos ah u tilmaami jirtay khaladaadkii kacaanka.
Waxaan xasuustaa 1989-kii in laga reebey fanaaniinta Waaberi oo dibada u soo baxeysa kaligeed, ka dib wareysi ay siisey BBC-da, ayay ayada oo Muqdisho ku suga waxa ay lahey “Nabad sugida ayaa Dayaarada iga reebey”.
Waxa ay ka gubatay dagaaladii waqooyiga ka dhacayay ayadoo tixaha hoose ay ka mid yihiin heestii ay si talantaali ah u wada qaadayeen iyada iyo khadra Daahir.
“DHAADHAAN HADAAH AHAY ADNA DHOOHANAAD TAHAY” https://www.youtube.com/watch?v=CoV1ON7lWhA
Markaad adigu dhimataa
naftu iga dhaqaaqdaa
Markaad adigu dheregtaa
dhibaatadu I deysaa
Dheehaagan wacan baa
aniguna ku dhaashtaa
Dhaxalkii ad reebtaa
Markaan soo dhowaadana
waad iga dhaqaaqdaa
Ana kuma dhegaystee
anoon dhuumanayn baan
Dhegaha kaa furaystaa.
Wixii adiga kaa dhumay
Anigana I dhaafyoo,
dhaan-dhaan hadaan ahay
Adna dhoohanaa tahay
dhulkan kala fogaadiyo
yeysu soo dhaweeya
Dhismihii adkaan jiray
inaan kala dhaltaalaa
Dhegxumo iyo yaab iyo
talo dhacantay weeyee
Midnimada ma dhowrraa
Labaatan iyo afartii sano ee Soomaali dalanbaabiga ku jirtay Saado dhexdaa u xirneyd, waxa ay afkeeda ku taageereysay Soomaalida dhibaateysan, ayada oo dhinaca Kenya iyo Ethiopia ka hadashay qadiyada uga aadan.
Waxaa weli aan la hilmaami Karin in ay aheyd fanaanada kaliya ee tagtay xeryaha qaxootiga Soomalida Kenya, si ay u aragto noloshooda maalmana ula soo qaadato.
Waa maxay masuuliyada ceynkaas ah oo Saado kaliya saarneyd? Anagoo og in Madaxdii 24sano ee lasoo dhaafey Soomaliya soo maray iyo siyaasiyiintii loolameysayba ay u garanwaayeen shacabkooda Soomaliyeed ee daruufta ceynkaas ah ku sugnaa (MARKA LAGA REEBO AXMED SAMATER OO ISNA TAGEY XERYAHAAS).
Soomaaliya ma ayan waayin fanaanad, waxa ay dilkaan ku waayeen qof Hormood u aheyd Haweenkayaga Soomaaliyeed, kaalinweyna kulaheyd ilaalinta midnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed.
Waxaan dilkan ku weynay qof in badan oo raga Soomaliya meesha ay taal dhigey manta ka hortaagneyd in ay meel ka xun u sii jiidaan.
War aan wada tashano
Wada tashan meyno
Aan kala Tashano
Aan kuu taliyo.
Adigu ii tali walal
Hadaba aan kala tagno
kali tagimeynee tabtaas ayay noo ahaaneysaa.
Saado Raxmad ilaah ha siiyee, ma ayan aheyd mid talada Soomaliya ee raggu isku koobey aaminsaneyd in ay kali garwadeen ka noqdaan ayada oo caqliga ifineysay in hogaanka iyo taladu ku xirnaato.
Tixahan hoose oo aan kusoo koobi Karin shaqsiyada iyo cida Saado aheyd ayaan ugu hibeeyay in ay ahaadaan qayb ka turjumeysa xasuusteyda cida Saado aheyd iyada oo aan filayo in Soomaalina xusi doonto baalka ay taariikhda ku yeelan doonto.
Kuwii dileyna in ay ku khasaareen aasida Saado ayaan uga tagi lahaa, magaceeduna inta Soomali nooshahay la xasuusan doona taas oo raad u noqonayaan waxa ay nooga tagtay.
HALYEEYAD WADAN BEY AHEYD
HORMOOD DUMAR BEY AHEYD
HOOYADII FANKA BEY AHEYD
U HEELAN DANTEENA OO
HABEENO U SOO DHAXDO
MARNA ANAN HAREERMAREYN
HIIL IYO GARASHEY LAHEYD
HALABUR SARE BEY ALHEYD
HIMILO QARAN BEY LAHEYD
XAQOY HAGTO BEY LAHEYD
RUNTOY HADASHOY LAHEYD
HANAAN QURUX BAY LAHEYD
EEBE UGU HIILIYOO
HIBO UGA DHIGEY NAFTED
GEENYADII HAWD KA TIMID
HAADA MIYEY WADHEEN?
WARAABAHA YAW HALIGAY?
YOW HADOODILEY GOODIRKII?
DUGAAGII KU HOOMSANAA
HAMUUNYADA BAAS U QABAY
TOLOW YEY KU HEYB YIHIIN?
MISE HALAQ LABA AFLAABA HALEY.
RABBOW HOY UGA YEEL
HARKII JANADII WACNEYD